Shirweynaha Cafis oo ka furmaya Turku 5.-6.7.2017 - Jazeera FM
Arimaha Bulshada News
Magaalada Turku waxaa ka furmaya5.-6-7 shirweyne loogu magac daray ”Cafis” kaas oo ay si wadajir ah usoo qabanqaabiyeen Daladda Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Galbeedka Finland, magaalada Turku, Guddigga Difaacayaasha Nabadda ee Finland, Ururka saaxiibtinimada Finland-Soomaaliya iyo rugta CAFIS.
Shirweynaha Cafis waa olole lagu doonayo in dadka Soomaalida ah meelkasta oo ay joogaan loo sameeyo madallo iyo fursado ay kaga qeyb-qaadan karaan dib-u-heshiisiinta iyo is cafinta umadda Soomaaliyeed, si dalkooda ay nabad uga dhigtaan wixii dhacayna
ay isaga cafiyaan.
Shirweynahan oo ah kii ugu horeeyay ee nuuciisa ah ee wadankan Finland lagu
qabto ayaa waxaa labada maalmood oo uu socdo lagu soo bandhigi doonaa doodo cilmiyeysan iyo kuwa furan, barnaamijyo iyo tusaalooyin tayeysan oo gundhig fiican u noqon kara dadaalada socda iyo barnaamijyada dib-u-heshiisiineed ee mustaqbalka.
Shirka wuxuu u furan yahay dhamaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo cid kasta oo daneyneysa.
Faah-faahin dheeraad ah kala xiriir qabanqaabiyayaasha madasha:
← 2017: Liiska Magaalooyinka Ugu Qaalisan Dunida Xagga Nolosha oo Lasoo Saaray
Kaddib hishiiskii dhamaaday ee Kabtan John Terry’ Chelsea oo iska diraysa mid ka mid ah daafacyadeeda muhiimka ah →